ပြည်သူတွေ ကို မြှောက်ပေးနေ တဲ့ အနုပညာ သမားတွေ ဆိုကာ တချို့ဝေဖန် ပြောဆိုတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မ ကောင်းစွာ ပြန်လည် ရှင်းပြလာတဲ့ ဖြိုးငွေစိုး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပြည်သူတွေ ကို မြှောက်ပေးနေ တဲ့ အနုပညာ သမားတွေ ဆိုကာ တချို့ဝေဖန် ပြောဆိုတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မ ကောင်းစွာ ပြန်လည် ရှင်းပြလာတဲ့ ဖြိုးငွေစိုး
ပြည်သူတွေ ကို မြှောက်ပေးနေ တဲ့ အနုပညာ သမားတွေ ဆိုကာ တချို့ဝေဖန် ပြောဆိုတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မ ကောင်းစွာ ပြန်လည် ရှင်းပြလာတဲ့ ဖြိုးငွေစိုး
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မင်းသား ဖြိုးငွေစိုးကတော့ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့် အနေနဲ့ ပြည်သူ့ပရိသတ်တွေအတွက် စားသောက်စရာလေးတွေလိုက်လံဝေငှပေးပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်နေ လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ပြည်သူ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အတူ အပြည်အဝ ရပ်တည်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တချို့အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပြေ ာဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြိုးငွေစိုးက ယခုလိုပဲ ပြန်လည်ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။မိသားစုလည်းတွေတစ်ကွဲတပြားဖြစ် ပြည်သူ့သွေးတွေလည်းမြေခကြ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်း အဖမ်းခံရ ကျန်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေ ရင်ထဲဝင် ခံစားကြည့်ပါဗျာ……ကျွန်တော်တို့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်းပြည်သူပါပဲ အလယ်အလတ် လူတန်းစားပေါ့ တချို့ဝန်ထမ်း တွေ ထင်ကြတာက ဘဝပျက်ရင်အောက်ခြေလူတန်းစားပဲပျက်ကြမှာ ကျွန်တော်တို့က ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့လေ တချိုးကျတော့လည်း ကျောင်းသားပြည်သူကို မြှောက်ပေးနေတာ ဖက်ခွက်စား အနုပညာ သမားတွေတဲ့လေ….
ဟုတ်ကဲ့ သေချင်းတရားဆိုတာ လူမရွေးပေမယ့် သေနတ်ဆိုတာတော့ ထင်ရှားတဲ့ သူကို ရွေးပစ်တတ်တာပါ…..ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုလည်း မြှောက်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့နဲ့ တစ်သားထဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လမ်းပေါ်ထွက်နေကြတာပါ….သာမန်ပြည်သူကို မှတ်မိဖို့မလွယ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ သိပ်ကိုမှတ်မိပါတယ်…..သာမန်ပြည်သူက လူစုခွဲလိုက်ရင် အများနဲ့ရော သွားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကထင်ထင်ရှားရှားကျန်ခဲ့တာပါ….သူ့ခံယူချက်နဲ့သူ မထွက်တဲ့သူတွေကို ကျတော့ အိပ်ပျော်နေကြတာလားတဲ့ ရှေ့ထွက်ပြီးအားပေးတဲ့သူကျတော့လည်း မြှောက်ပေးနေတာတဲ့ ထားပါလေ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ တစ်သက်လုံးခံလာရတာဆိုတော့ နေသားကျနေပါပြီတစ်ခုပါပဲ …
ကျွန်တော်တို့လည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက် သေစရာရှိရင် တကယ်ပစ်ရင် သေမှာပါဖမ်းစရာရှိရင်လည်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေက အရင်ဆုံးအဖမ်းခံရတာပါ ကျွန်တော်တို့မှာလည်းမိသားစုရှိတဲ့အတွက် သူတို့တွေလည်းဒုက္ခရောက်ကြမှာ ပူဆွေးကြရမှာပါပဲ….ကျွန်တော်တို့တတ်ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ လုပ်ဆောင်ခွင့်တွေအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့ထိပိတ်ပင်ခံရမှာကိုလည်း သိပါတယ်…….ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လမ်းပေါ်ထွက်ကြလည်း မတရားမှုကိုလက်မခံလို့အကြမ်းဖက်မှုကိုမကြိုက်လို့ ကျွန်တော် တို့ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားထဲ ဖြစ်ဖို့ လက်လုပ်လက်စားကအစ….သမ္မတထိအောင်ညီတူညီမျှလူ့အခွင့်အရေးရဖို့ တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ အသက်ကိုရင်းဘဝကိုရင်းအနာဂါတ်ကိုရင်းမိသားစုတွေကိုရင်းပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်ထင်လို့ ကိုယ့်ခံယူချက် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတိုင်း ချီတက်နေကြတဲ့သူတွေပါ ပြည်သူနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်နေကြတဲ့ ဖက်ခွက်စားတွေပါ…အန်ကယ်လေးအဆင်ပြေပါစေလို့ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးကြပါခင်မျာသူ့မှာလည်းမိသားစုနဲ့ပါ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ် ။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Phyo NgweSoe fb account
ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ မင္းသား ၿဖိဳးေငြစိုးကေတာ့ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ပရိသတ္ေတြအတြက္ စားေသာက္စရာေလးေတြလိုက္လံေဝငွေပးၿပီး လႉဒါန္းေပးခဲ့တာေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ တက္ႏိုင္တဲ့ဘက္ေန လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ျပည္သူ႔ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အတူ အျပည္အဝ ရပ္တည္ေပးေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ေျပ ာဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿဖိဳးေငြစိုးက ယခုလိုပဲ ျပန္လည္ရွင္းျပလာခဲ့ပါတယ္။မိသားစုလည္းေတြတစ္ကြဲတျပားျဖစ္ ျပည္သူ႔ေသြးေတြလည္းေျမခၾက အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြလည္း အဖမ္းခံရ က်န္ခဲ့ရတဲ့မိသားစုေတြ ရင္ထဲဝင္ ခံစားၾကည့္ပါဗ်ာ……ကြၽန္ေတာ္တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္းျပည္သူပါပဲ အလယ္အလတ္ လူတန္းစားေပါ့ တခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္း ေတြ ထင္ၾကတာက ဘဝပ်က္ရင္ေအာက္ေျခလူတန္းစားပဲပ်က္ၾကမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာမွမျဖစ္ဘူးေပါ့ေလ တခ်ိဳးက်ေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားျပည္သူကို ေျမႇာက္ေပးေနတာ ဖက္ခြက္စား အႏုပညာ သမားေတြတဲ့ေလ….
ဟုတ္ကဲ့ ေသခ်င္းတရားဆိုတာ လူမေ႐ြးေပမယ့္ ေသနတ္ဆိုတာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ သူကို ေ႐ြးပစ္တတ္တာပါ…..ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြကိုလည္း ေျမႇာက္ေပးေနတာမဟုတ္ပါဘူး သူတို႔နဲ႔ တစ္သားထဲကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ လမ္းေပၚထြက္ေနၾကတာပါ….သာမန္ျပည္သူကို မွတ္မိဖို႔မလြယ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ သိပ္ကိုမွတ္မိပါတယ္…..သာမန္ျပည္သူက လူစုခြဲလိုက္ရင္ အမ်ားနဲ႔ေရာ သြားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကထင္ထင္ရွားရွားက်န္ခဲ့တာပါ….သူ႔ခံယူခ်က္နဲ႔သူ မထြက္တဲ့သူေတြကို က်ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတာလားတဲ့ ေရွ႕ထြက္ၿပီးအားေပးတဲ့သူက်ေတာ့လည္း ေျမႇာက္ေပးေနတာတဲ့ ထားပါေလ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြကေတာ့ တစ္သက္လုံးခံလာရတာဆိုေတာ့ ေနသားက်ေနပါၿပီတစ္ခုပါပဲ …
ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္းလူျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသစရာရွိရင္ တကယ္ပစ္ရင္ ေသမွာပါဖမ္းစရာရွိရင္လည္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြက အရင္ဆုံးအဖမ္းခံရတာပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္းမိသားစုရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြလည္းဒုကၡေရာက္ၾကမွာ ပူေဆြးၾကရမွာပါပဲ….ကြၽန္ေတာ္တို႔တတ္ကြၽမ္းတဲ့အႏုပညာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေတြအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့ထိပိတ္ပင္ခံရမွာကိုလည္း သိပါတယ္…….ဒါဆိုကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလို႔လမ္းေပၚထြက္ၾကလည္း မတရားမႈကိုလက္မခံလို႔အၾကမ္းဖက္မႈကိုမႀကိဳက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျပည္သူေတြနဲ႔တစ္သားထဲ ျဖစ္ဖို႔ လက္လုပ္လက္စားကအစ….သမၼတထိေအာင္ညီတူညီမွ်လူ႔အခြင့္အေရးရဖို႔ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္လို႔ အသက္ကိုရင္းဘဝကိုရင္းအနာဂါတ္ကိုရင္းမိသားစုေတြကိုရင္းၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္ထင္လို႔ ကိုယ့္ခံယူခ်က္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း ခ်ီတက္ေနၾကတဲ့သူေတြပါ ျပည္သူနဲ႔အတူၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ေဖၚထုတ္ေနၾကတဲ့ ဖက္ခြက္စားေတြပါ…အန္ကယ္ေလးအဆင္ေျပပါေစလို႔ ဝိုင္းဆုေတာင္းေပးၾကပါခင္မ်ာသူ႔မွာလည္းမိသားစုနဲ႔ပါ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္” ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါတယ္ ။
သတင္းအရင္းျမစ္: Source – Phyo NgweSoe fb account
ပုရိသတွေ ကြွေစင်း သွား အောင် အရမ်း လန်း လွန်းနေတဲ့ ချောကလျာ
အလန်းစား ရိုက် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ ကျလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ
ဆက်ဆီ ကျကျ မိမိုက် လွန်းအောင် ကပြ ထား တဲ့ လုလုအောင် ရဲ့ ဗီဒီယို
Previous post နန်ယန် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ နဲ့ အတူ ငြိမ်းချမ်းမှု ရ ရှိအောင် အားမာန် အပြည့် နဲ့ ဟစ်ကြွေး နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
Next post အဖေ စစ် သား ဖြစ်နေ ၍ သား မှ မိဘ အဖြစ် စွန် လွှတ် လိုက်သော ဆရာဝန်
ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံတွေ ကို တင်ပေး တက်တဲ့ ဆွေဇင်ထက် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံများ
သူမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး အလှလေး ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်နေ ရပြီး အသည်းယားစရာ ကောင်းနေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်